Blog မှာ HTML code ပေါ်အောင်လုပ်နည်း ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
Blog မှာ HTML code ပေါ်အောင်လုပ်နည်း
12:10:00 am Blog 1 comment
ကျွန်တော်တို့ မိမိတို့ Blog တွေမှာ HTML ကုတ်တွေကို ဘယ်လိုပေါ်ချင်လဲ
ပေါ်ချင်သလိုပေါ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Blog
မှာ HTML တွေ ရေးတဲ့အခါ ဒီအတိုင်းရေးရင် result ဘဲ ထုတ်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်
HTML အကြောင်းဆက်ရေးတဲ့အခါ ကျွန်တော် အသေးစိတ်
ကိုယ်တိုင်းရေးလို့ရတဲ့နည်းကိုတင်ပြပေးပါမည်။ အခုတော့ မအားသေးလို့ပါ။
တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်.ဘယ်လောက်ခတ်သလဲဆိုရင် copy နှင့် paste ကိုသိရုံးနဲ့
လုပ်တက်စေရပါမည်. အာမခံပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘာလို့ ကြောငြာကောင်းသလဲဆိုရင်
တော်တော်ကောင်းလို့ပါ။ လေကြောရှည်လိုက်တာက သိပ်ပြီ ရေးစရာ
မလိုလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ကျွန်တော် (၃) မျိုးတင်ပြပါမည်.
တစ်မျုိုးကတော့ site ဘဲ ညွန်းတော့မယ်နော်။ လုပ်နည်းက အတူတူ ဖြစ်လို့ပါ။ ပေါ်တဲ့
ပုံစံလေးဘဲ ကွဲပါတယ်။နောက်တစ်နည်းကတော့ ကျွန်တော် ရေးပြပါမည်။
1. http://www.opinionatedgeek.com/DotNet/Tools/HTMLEncode/Encode.aspx ဒီဆိုဒ်ကို အရင် ဖွင့်လိုက်ပါ။အောက်ပါအတိုင်းကျလာမည်။
2. အပေါ်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း မိမိ Blog မှာ ပေါ်စေချင်တဲ့ HTML တွေကို Encode
input Text ထဲမှာ ရေးလိုက်ပါ။
3. Encode ဆိုတဲ့ Button ကို click လိုက်ပါ။
4. Encode Output ဆိုပြီ Box တစ်ခု ကျလာပါမည်။ အဲဒီထဲက code တွေကို copy
1. မိမိ Blog မှ
2. New Post မှာ Paste လိုက်ပါ. ပြီရင်Save ကို click လိုက်ပါ။publish ကို click ပါ ။View Blog ကို
မတင်ပြတော့ပါ။ ဆိုဒ်သာတင်ပေးပါမည်။ အပေါ်က နည်းနဲ့ အတူတူ ဖြစ်ပါတယ် ပေါ်တဲ့
ပုံစံလေးဘဲ ကွဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုပုံစံလဲလို့မေးရင် သုံးကြည့်လိုက်ပါ။
သိပါလိပ်မည်. ကျွန်တော်ဆိုဒ်ရဲ့ HTML အကြောင်းမှာ ကျွန်တော် တင်ပြထားပါတယ်
ပေါ်တဲ့ ပုံစံမတူတဲ့ နှစ်မျိုးယှဉ်ကြည့်လိုက်ပါ။.။အောက်က ဆိုဒ်ကိုသွားလိုက်ပါ။
***Song&Funny Crazyများ နှင့် Facebookသူငယ်ချင်းများ*** 8 November 2014 at 20:33